Sadexdayda Xeer ee ku Saabsan Jinsiyada, Diinta, Siyaasada, Jinsi iyo Cuqdad | Martech Zone
Sadexdayda Xeer ee ku Saabsan Jinsiyada, Diinta, Siyaasada, Jinsi iyo Cuqdad
Saturday, April 14, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Warka ku saabsan Imus Toddobaadkan runti wuxuu kiciyay wadahadal fara badan waxaana ku riyaaqay inaan ra'yigayga la wadaago asxaabteyda iyo qoyskeyga. Ahaanshaha aabbe, waxaan si gaar ah uga taxaddaraa sida aan carruurteyda wax u baro. Runtii waa run in cunsuriyada iyo nin jeclaysiga ay waalidku u gudbiyaan caruurtooda.
Marnaba ma fahmi doono. Nin ahaan, waligey ma fahmi doono waxa ay tahay haweeneydu. Sida cad, waligey ma fahmi doono waxa ay u egtahay in laga tiro badan yahay. Sida nin toosan, waligey ma fahmi doono waxa u eg khaniisnimada. Masiixi ahaan, waligey ma fahmi doono waxa diintu kale tahay. Waxaan aqbalay inaanay marnaba suurta gal noqon doonin inaan weligay fahmo; marka taa badalkeeda, waxaan si fudud isku dayaa inaan ixtiraamo kuwa aanan fahmin.
Qof kastaa wuu ka duwan yahay waana kala duwanaanshaheenna kuwa inaga dhigaya kuwo gaar ah iyo hibo Eebbe siiyay. Waan jeclahay kala duwanaanshaha dhaqamada, jinsiyada, diimaha, jinsiga, hantida… waxkasta oo iyaga ku saabsan. Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah sababaha aan aad u jeclahay cuntada… dhadhanka dhaqamada kala duwan (Hindida, Shiinaha, Taiwan, Talyaaniga, Cuntada Nafta, Boolishka, Yukreeniyaan… mmm) waa wax lala yaabo. Muusigeyga muusigeygu waa isku mid… waxaad iga heli kartaa anigoo dhageysanaya Sumcad BIG, Saddexda Kireyste, Mudvayne ama Dhallaanka Toyland… iyo wax kasta oo u dhexeeya. (In kasta oo ay tahay inaan qirto inaanan dhadhamin waddan).
Jaangooyooyin laba-laab ah waa qayb nolosha ka mid ah. Heerarka cashuurta dakhliga, dhibcaha SAT, baarkinka naafada ah… waad magacawday waxaana jira laba jibbaar. Laba-jibbaarada ma ahan wax xun… qof walba wuu ka duwan yahay heerarkiisuna waa kala duwan yahay waa in dalbo. Waxaan maqlay oo arkay dadka qaar oo raba inay hada adeegsadaan isla tilmaamihii shaqada laga ceyriyay Imus oo ay ku dabaqaan hip-hop ama majaajiliiste.
IMHO, farqi weyn ayaa udhaxeeya bartilmaameedka hadalada midab takoorka ah ee koox gaar ah oo dad ah si ay ugaftamaan ama guud uga hadlaan waxbadan. Kaftan ka samee dadka buuran waxaana laga yaabaa inaan noqdo kan ugu horeeya ee qoslaya una sheegaya kaftanka qof kale… laakiin kaftan buuran macnaheedu waa inuu i dhaawaco taasna waa ka duwan tahay (in kastoo aan weli qosli karo oo aan qof kale u sheegi karo). Waxaan maqlay kaftanka ku saabsan muxaafidka, Liberalernaanka, Yuhuudda, Masiixiyiinta, Madowga, Caddaanka, Aasiyaanka, Carabta, iwm. Kuwaas oo qosol badan… iyagu si kaftan ah ayey u buun buuniyaan sheeko xasaasi ah laakiin uma faafiyaan fikradaha xun xun qaab waxyeello leh.
Farqiga ayaa ah in hadafku yahay in la dhaawaco ama laga caawiyo fahamkeena midba midka kale. Mararka qaarkood taasi waa arrin aragti ah, laakiin taasi waa tan saxda ah ee ay tahay inaan ka digtoonaanno. Xariiq ma leh ciida. Wax baa hal qof ku qosli kara qofka kalena ku dhaawici kara.
Taasi waxay tiri, "Weligey qadka ma dhaaftay?". Haa, gabi ahaanba ... isla markiibana waan ka qoomameeyay waana ka xumahay. Ma aaminsani inaan waligey nin jeclaysan, laakiin waxaan ahaa dhalinyaro oo jaahil ka ah dadka kale. Saddexdaan sharci waa waxa aan ka shaqeeyey si aan carruurteyda u siiyo wax bilow ah oo aan ku bilaabo.
Haddii dadku barteen inay gartaan kala duwanaanshaheenna, ixtiraamaan oo ay qaataan, waxaan si daacadnimo ah u dareemayaa inay dunidan noqonayso meel aad ugu fudud in lagu noolaado.
Waad ku mahadsan tahay JD oo igu dhiirrigelisay inaan qoro tan.
Abaalmarinta Doorashada Blogging
25 Calaamadood oo Aad Dhibaato Ku Yeelan Karto Blogging
Apr 14, 2007 at 4: 50 PM
Qodobkaaga koowaad waa wax aan jeclaan lahaa in qof kastaa fahmo. Habka ugu wanaagsan ee lagu helo faham koox dad ah, diin ah, ama wax kasta oo naftaada ka duwan ah waa inaad yeelato maskax furan, inaad ixtiraamto waxay aaminsan yihiin oo aadan ku qasbin hababkaaga dushooda. Farriin weyn.
Apr 14, 2007 at 5: 14 PM
Waa inaan u dabaaldegnaa kala duwanaanshaheenna. Waxyaabo badan ayaa jira oo aan isku siino. Safarku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee indhaha lagu furo. Anigoo Mareykan ah, waan naxay markii aan safaro ku kala maray dalal kala duwan waxaanan ogaaday in adduunka intiisa badani horumaraan. Waxaan leenahay aragti ah in USA ay tahay mida kaliya ee kaliya, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo inbadan la arko. Waxay la mid tahay cuntada iyo Jinsiyada. Waxaa jira waxyaabo badan oo wanaagsan. Waan ku raaxaystaa la hadalka cunsuriyiinta iyo barashada iyaga. Waxaan la hawl galiyaa dad aan waxbadan iskaga mid ahay. Doodda ixtiraamka leh ayaa wanaagsan, nacaybku maahan. Shaqo fiican Doug
Apr 14, 2007 at 5: 45 PM
Dad badan oo la socda xaaladda Imus ayaa ruxaya calanka hadalka xorta ah, iyagoo sheegaya in toogashadiisu ahayd mid aan Mareykan ahayn.
Waxaan u maleynayaa in badanaa aan ilaawno in hadalka Imus la ilaaliyay. Ma aha in xubnihiisii ​​lagala baxay, ama uu ku fadhiyo qolka xabsiga wixii uu yidhi aawadood. Intaas weeye dastuurka ayaa bixinaya.
Waxaa jira farqi u dhexeeya hadalka la ilaaliyo iyo cawaaqibka ka dhaha waxyaabo aan la jeclayn adoo adeegsanaya hadalka la ilaaliyay.
Qofna qasab kuma aha inuu shaqaalaysiiyo Imus haddii uusan rabin. Qofna uma baahna inuu la hadlo, dhageysto, ama wax kale. Wuxuu bixinayaa cawaaqib xumada (cadaalad ah iyo haddii kaleba) hadalada uu sheegay isagoo adeegsanaya hadalkiisa ilaashan.
Apr 15, 2007 at 6: 08 PM
Sidee ayuu kuugu fiicanyahay Mudane Karr. Waxaan ku leeyahay waxaad ku dhegan tahay waxaad ku fiicantahay. Kuwani waa noocyada asaasiga ah ee "Kumbaya" ee aan ka soo horjeedo, iyo waxa aan u aaneeyo in badan oo ka mid ah arrimaha bulshada.
Warqad furan oo ku socota Mr. Karr
Apr 15, 2007 at 7: 02 PM
Waxaan ku boorin lahaa dhamaan akhristayaasha inay raacaan ku xirnaanta boostada ET Cook si aan u aqriyo jawaabteyda. Waa mowduuc mudan in laga doodo, taasi waa hubaal. Kani waa nooca maadada ee qof walba jecel yahay inuu iska ilaaliyo maalmahan.
Aamusnaanta ayaa na dhaawacaysa - waxaan u baahannahay inaan inbadan ka doodno.
Apr 15, 2007 at 7: 05 PM
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada xushmadda leh Mudane Karr. Si wanagsan ayaan uga soo jawaabey faallooyinkaaga.